သင့်အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုခု ရှိနေကြောင်း ပြသနေတဲ့ အချက်များ - Shwe Khit Online TV
HomeParanormalသင့်အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုခု ရှိနေကြောင်း ပြသနေတဲ့ အချက်များ
June 9, 2021 Bo Bo Paranormal 0
သင့်အနေနဲ့ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေရင်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုမျိုး ခံစားရဖူးပါသလား ? တစ်ကယ်လို့ ခံစားရဖူးတယ်ဆိုရင်ကော ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မွလို့ သင့်အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ ? shwekhitonlinetv.com
အမေရိကန်နိုင်ငံက သရဲတစ္ဆေနဲ့ လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကို စူးစမ်းလေ့လာရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ လူ (၁၀) ယောက်မှာ (၆) ယောက်က သရဲတစ္ဆေတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ လေ့လာစူးစမ်း သုတေသနပြုမှု မှတ်တမ်းတွေအရ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်တက်တဲ့ သရဲတစ္ဆေကဲ့သို့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေမယ်ဆိုရင် သိသာစေမယ့် အချက်လေးတစ်ချို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….. shwekhitonlinetv.com
၁။ နံနက် (၃) နာရီ နဲ့ (၄) နာရီကြားရောက်တိုင်း မကြာခဏဆိုသလို ရုတ်တရက်အိပ်ရာမှလန့်နိုးတက်ခြင်း။ နိုးတဲ့အခါမှာလည်း တစ်စုံတစ်ယောက်က စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရပြီး ကြောက်ရွံနေတက်ခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၂။ နားမလည်နိုင်လောက် အခန်းတွင်းအပူချိန်ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲတက်ခြင်း။ လေထဲမှာ ရုတ်တရက် လျှပ်စစ်ဓာတ်တစ်ခုခု ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသလို ခံစားရခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၃။ အိမ်မှာထားရှိတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယာတစ်ခုခု ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတက်ခြင်း။ ထိုသို့ပျောက်ဆုံးနေရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အခြားနေရာတွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိရတက်ခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၄။ နားထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်မသိနိုင်တဲ့ အသံများကိုတိုးညှင်းစွာကြားရခြင်း။ ခြေသံ၊ ကြမ်းပေါ်သို့ တစ်ခုခုပြုတ်ကျသည့်အသံ၊ တောက်ခေါက်သံ စသည့်အသံများကို မကြာမကြာ ကြားနေရတက်ခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၅။ မိမိတစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်များတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က စောင့်ကြည့်နေသလိုမျိုး ခံစားရခြင်း။ အရိပ်များ၊ ဖျတ်ခနဲလှုပ်ရှားမှုများကို မျက်လုံးထောင့်စွန်းများမှ တွေ့မြင်လိုက်ရသလို ဖြစ်ခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၆။ အိမ်တွင်းရှိ လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်များ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း။ မီးသီး၊ မီးချောင်းများ အလိုလျှောက် ပိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ခြင်း။ အခြားပစ္စည်းကိရိယာ အချို့ရုတ်တရက် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၇။ ရေမွှေး၊ အပုန်နံ့၊ ပန်း၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ အစားအစာ စသဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရနံ့များကို ရုတ်တရက် နှာခေါင်းထဲတွင်ရရှိနေခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၈။ အိမ်ရဲ့ တစ်ချို့သောနေရာ၊ အခန်းများသို့ ရောက်ရှိဝင်ရောက်သောအခါများတွင် အလိုလိုနေရင်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးသလို ခံစားရခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
၉။ မျက်လုံးဖြင့် မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ လက်ကဲ့သို့သော အေးစက်စက်အရာတစ်ခုမှ မိမိခန္ဓာကိုယ်အား လာရောက်ထိတွေ့သလို ခံစားရခြင်း။ shwekhitonlinetv.com
ကဲ ….. ဒီအချက်တွေထဲက ကိုယ်ကြုံဖူးတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခုရှိရင်လည်း အောက်က ကွန်းမန့်မှာပြန်လည် ဝေမျှပေးသွားကြပါဦးနော်။ shwekhitonlinetv.com
ကြည့်ရှုသူတွေကို ရသမျိုးစုံပေးနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က ဓာတ်ပုံများ
သဘာဝတရားက ဖန်တီးထားတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အနုပညာလက်ရာများ